Simple and feature rich Video Collaboration application for Small Medium Business Users
End-to-end encrypted audio and video conferencing
Scalable cloud solution without software installation
Fully integrated with Virtual PBX and Outlook
အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော Video Collaboration application
ပြက္ခဒိန်မှ တဆင့် အလွယ်တကူ အစည်းအဝေး အချိန်ဇယား သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
အရေးကြီးသော လျှို့ဝှက် (End-to-end Encrypted) ရုပ်သံ အစည်းအဝေး
စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ ကို အလွယ်တကူ မျှဝေ နိုင်ခြင်း။
အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ (Meeing Minutes) နှင့် သီးသန့် မှတ်ချက်များကိုလည်း မျှဝေ နိုင်ခြင်း။
မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင် ကို မျှဝေနိုင်ခြင်း နှင့် တိုက်ရိုက် တင်ဆက်ပြသနိုင်ခြင်း။
အစည်းအဝေး အနှစ်ချုပ်များအား အလိုအလျောက် စုစည်း အစီရင်ခံ တင်ပြပေးခြင်း။
အစည်းအဝေး တစ်ခု ချင်းစီအတွက် သီးသန့် Link များ ရှိခြင်း။
အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သော ကွန်ရက် အခြေခံ လုပ်ငန်းသုံး ပရိုဂရမ် တစ်ခု။
တခြား Software ထပ်မံ ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်သော “Cloud” အခြေခံ စနစ်။
ရာနှုန်းပြည့် WebRTC နှင့် HTML 5
Virtual PBX နှင့် Outlook များတွင်လည်း လွယ်ကူစွာ ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
The GAC2500 deliver HD audio quality, automated provisioning for easy deployment, advanced security protection for privacy and broad interoperability with most 3rd party SIP devices and leading SIP/NGN/IMS platforms.
GCA2500 သည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ HD အရည်အသွေး၊ အလိုအလျောက် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း၊ လုံခြုံ စိတ်ချမှု အတွက် အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေး စနစ် ပါရှိခြင်း၊ အခြားသော SIP စက်ပစ္စည်းများနှင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရုံမျှ မက SIP/NGN/IMS အစရှိသည့် ပလက်ဖောင်းများဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
GVC3200 supports Grandstream’s robust IPVideoTalk Pro cloud platform for plug and play video conferencing while also being interoperable with any 3rd party SIP video conferencing platform - thus offeringagreat option to expand or implementa3rd party platform.
GVC3200 သည် Grandstream ၏ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်သော IPVideo Talk Pro cloud platform တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မည်သည့် 3rd ပါတီ SIP ရုပ်သံ အစည်းအဝေး platform မျိုးဖြင့်မဆို အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်ပြီး ရုပ်သံ အစည်းအဝေးများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
GVC3202 offersaslightly lower capacity option for businesses looking for up to 3-way video-conferencing and support for up to2Full HD monitors.
GVC3202 သည် ၃ဦး ၃ဖလှယ် ရုပ်သံ အစည်းအဝေးများအတွက် အနည်းငယ် အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပေမယ့် အရည်အသွေးမြင့် Full HD monitors ၂ ခု အတွက်တော့ အဆင်ပြေပြေ ရုပ်သံ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းဖြင့် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။